Muxuu sameeyey Gareth Bale markii uu burburay heshiiskii uu ku aadi lahaa dalka Shiinaha? – Gool FM
(Madrid) 30 Luulyo 2019. Gareth Bale ayaa bartiisa Instagram-ka soo dhigay muuqaal muujinaya isaga oo xiran maaliyadda cusub ee Real Madrid, waliba midda cagaaran ee ah shaarka 3-aad ee kooxda Los Blancos ay ku ciyaari doonto xilli ciyaareedka dhowaan furmi doona, maalmo yar uun kaddib markii la soo afjaray u dhaqaaqistii horyaalka Shiinaha.
Xiddiga reer Wales ayaa la filayay inuu ku biiro kooxda Jiangsu Suning heshiis saddex sano ah oo uu ku kacayay lacag dhan 1 milyan gini oo uu qaadan lahaa isbuucii kaddib markii tababaraha Real Madrid ee Zinedine Zidane uu caddeeyay in Weeraryahanka uusan qeyb ka ahayn qorshihiisa xilli ciyaareedka 2019-2020.
Yeelkeede, maalintii Axadda ahayd ee Isbuucan ayaa waxaa si deg deg oo u soo shaac baxay in la kansalay wax walba oo ku aaddan u dhaqaaqistiisa kooxda reer China, isla markaana ay u badan tahay inuu sii joogayo qalcadda Santiago Bernabeu.
30-sano jirkaan ayaa u muuqday mid muujinaya sida ay uga go’an tahay inuu sii joogo kooxda reer Spain ee Real Madrid xilli uu baraha ay bulshadu ku kala warqaado waliba qeybta Instagram-ka soo dhigay muuqaal iyo sawir isaga oo xiran maaliyadda cusub ee Real Madrid waliba mid cagaaran ee ah tan saddexaad ee kooxda Los Blancos ay ku ciyaari doonto ololaha cusub.
Gareth Bale ayaa ka mid ah xiddigha ugu muhiimsan kooxda Real Madrid, balse waxa uu khilaaf kala dhaxeeyaa maallinka kooxdiisa ee Zidane, waana tan keenatay in uu ku fikiro u dhaqaaqista horyaalka Shiinaha si uu lacago badan kaga soo shaqeysto.
Si kastaba ha ahatee, Gareth Bale ayaa kaddib dhacdaan iyo marka si weyn loo dhuuxo sirta ka dambeeysa waxa ay jawaabta kuu soo baxaysa ay noqon kartaa in Bale uusan meelna uga socon Real Madrid.
Manchester United oo dalab ka gudbisay Samuel Umtiti, xili Barcelona ay jawaab cad ka bixisay